Jadwalka Tareenka Degdega ah ee Ankara Eskisehir iyo Qiimaha Tigidhada - TRENKART | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraAnkara Eskisehir Jadwalka Tareenka Xawaaraha Sare iyo Jadwalka Ticket - TRENKART
Ankara Eskisehir Jadwalka Tareenka Xawaaraha Sare iyo Jadwalka Ticket - TRENKART
18 / 09 / 2017 06 Ankara, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, TURKEY
Istanbul Eskisehir iyo Eskisehir Ankara, iyo sidoo kale safar sare oo tareenka ah oo u socda Ankara Ankara.
Waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan tareenka Eskisehir High Speed ​​Train (YHT), oo ah habka ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee aad ku gaari karto Eskisehir oo ka socota Ankara. Tareenka Xawaaraha Sare ee loo yaqaan 'Speed-Speed ​​Speed ​​Train', oo la soo dhisay waqtiyadii u dambeeyay, oo u dhexeeyay Istanbul iyo Ankara, ayaa sidoo kale istaagay Eskisehir iyo sidoo kale meelo kale oo laga raaco iyo sidoo kale waxay soo qaadaan kana baxaan rakaabka.
Imisa tigidh ayaa?
Rakaabka raba in ay ku safraan tareenka xawaaraha sare ee Ankara Eskisehir ayaa la socda qiimaha tikidhada kala duwan.
30 + 2 Pulman Tikidhada dhaqaale ee qiimaha ugu hooseeya.
Haddii aad ka fekereyso wagon, 2 + 2 dhaqaalaha tigidhada Cuntada waxaa lagu iibiyaa xaddiga 30 ee fasalka dhaqaalaha.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto inaad iibsato tigidhada 2 + 1 Pulman Business halkii, qiimaha tikidhka aad bixin doonto waa Lacagta 43.50.
Dabcan, aad u mahadsantahay ololaha ku haboon waqtiga la iibsanayo, qiimaha tikidhada tareenka ee Ankara Eskişehir Soodhaweyntu way kala duwanaan kartaa 23.50 ilaa 54 TL.
Tikidhada qiimaha gawaarida qaada
Ma tahay inaad si joogto ah u bixisaa sicirkaan markaad u safraysid tareen xawaare sare leh oo u dhexeeya Eskisehir Ankara ama Ankara Eskisehir? Jawaabtu maaha mid xitaa sababtoo ah TCDD waxay bixisaa qiimo dhimis iyo rikoodhada TRENKART labadaba.
Jawaabta su'aasha ah TRENKART waxa weeye in TCDD yahay kaadhka bixiya dhimis loogu talagalay isticmaalka Istanbul Ankara iyo Istanbul Isticmaalka Fast Speed ​​Train ee rakaabka.
TRENKART, kaas oo bixin kara qiimo jaban marka loo eego tirada safarada tareenka xawaaraha sare, waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho xuquuqyo kala duwan oo leh khariidad raqiis ah.
Halkee laga gadan karaa TRENKART ama CARTA TABABAR
Haddii aad rabto inaad hesho TRENKART, waxaad ka sameyn kartaa liistada liiska TCDD waxaadna sameyn kartaa macaamilka diiwaangelinta iyo xirmooyinka.
Halkan waxaa ah xarumaha qidabka TCDD ee iibiya BAABUURTA BAABUURKA:
PENDIK KAYSERI BASMANE
YENIKAPI SİNCAN BALIKESİR
IZMİT POLATLI TORBALI
DIVRİĞİ VAN KONYA
La xiriir ERZINCAN si toos ah
Eeg Tusmooyinka Dhameystirka KARS
Qiimaha TRENKART, intee in le'eg, imisa jeer ayaa la qaadaa?
Haddii aad go'aansato inaad iibsato TRENKART, waxaad tagi kartaa goobaha TCDD ee kor ku xusan. Xogta qiimaha way kala duwan tahay iyadoo ku xiran nooca xirmada aad heli doonto iyo tirada isbaarooyinka.
Jadwalka Xawaaraha Sare
Jadwalka Kubadda Koleyga ee Eskisehir Ankara sidoo kale waa mid ka mid ah mawduucyada xiisaha leh.
Haddii aad qorshaynayso inaad ka soo baxdo Eskisehir ilaa Ankara adoo raacaya Tareenka Xawaaraha Sare, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah duulimaadka 06.20-13, oo la qabanqaabiyo saacad kasta oo ka dambeeya saacadda 14.
Tareenka ugu dambeeyay ee Jadwalka Kubadda Koleyga ee Eskisehir ee Ankara wuxuu ku socdaa biyaha 22.00 waxaana uu imaanayaa Ankara 23.45.
Dabcan, mid ka mid ah arimaha aan la ilaawin, YHT ie jadwalka tareenka xawaaraha sare waxay ku kala duwan yihiin xilliyada kulaylaha iyo xilliga qaboobaha. Ka hor intaadan iibsan tigidhkaaga, waa inaad sidoo kale eegtaa jadwalka hadda.
Eskişehir Ankara waxay ku socotaa tareenka xawaaraha sare? Imisa saacadood ayay qaadaneysaa?
Haddii aad la yaaban tahay illaa intaad qaadaneyso tareenka xawaaraha sare ee Eskisehir Ankara ka hor intaanad iibsan tigidhka, waxaad sidoo kale ka heli kartaa jawaabta boggayaga internetka.
Eskişehir iyo Ankara oo rakaab ah oo u safraya Eskisehir ayaa waxay gaari doonaan goobahooda saacadaha 1, daqiiqado 40, daqiiqado 100.
Eskişehir Ankara Tareenka Tareenka Tareenka ayaa sidoo kale wax yar ka sarreeya saacadda 1.5.
Soo iibso Eskisehir Tikidhada Kubadda Koleyga ee Ankara
Haddii aad go'aansato in aad u safarto Tareenka Xawaaraha Sare Eskisehir iyo Ankara, qiimaha tareenka-xawaaraha sare ee ay helayaan habka for Turkey
Waxaad si fudud u heli kartaa tigidhada adoo isticmaalaya websaydhka Jamhuuriyadda Duulimaadyada Gobolka.
Cinwaanka bogga aad ka heli karto tigidhada TCDD Tareenka Bilaashka ah Guji
Si aad u hesho TRENKART
Haddii aad rabto in aad hesho TRENKART, waxaad ka heli kartaa macluumaad gujinaya xiriir bogga TCDD this: TRENKART
Malaqiyada Tababarrada Pink Trambus waxay bilaabmaysaa
Wax walba oo kooxda de.köt wanaagsan in kuraasta var.xnumx-mararka qaarkood in jihada geliyor.ho dambe u dhiganta by maanka nasrettin geliyor.xnumx-safar u socday inuu ku siiyo tikidh xafiiska sanduuqa on (dhimis in kastoo) lacagta celin dib ma aha etmiyor..b oo dhan waa xal uygulama..acil soooooo qalloocan waa in la helay.